ရသေနျ့ကို လုံးဝကြိုမသောကျသငျ့တဲ့ အကွောငျးအရငျး…. – Youth Bar
ရသေနျ့ကို လုံးဝကြိုမသောကျသငျ့တဲ့ အကွောငျးအရငျး….
ကနျြးမာရေးဗဟုသုတအဖွဈပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ။ရသေနျ့ကိုရနှေေးကြိုသောကျတာ မဟုတျပဲနပေူထဲခထြားရငျတောငျကငျဆာဖွဈပါတယျ။ရသေနျ့ဖွဈဖို့ကလိုရငျးဆေးခပျရပါတယျ။ရသေနျ့ထဲမှာထညျ့ထားတဲ့ကလိုရငျးဓာတျက အပူနဲ့ထိတှတေဲ့အခါကလိုရိုဖောငျးဓာတျအဖွဈပွောငျးလဲသှားပွီးကွာရှညျအပူပေးသုံးစှဲလာတဲ့အခါ
အပူပေးကြိုသောကျကွပါ။ဖွဈရငျခံကွပါ။ ရိုးရိုးရသေနျ့သညျPH7ပါ။PH7 ကိုထပျသနျ့စငျရငျအယျလျကာလီရသေနျ့ ဖွဈလာပါတယျ။
အယျလျကာလီသောကျရသေနျ့ ဖွဈသှားပါတယျ။အယျလျကာလီသောကျရသေနျ့သညျကနျြးမာရေးအတှကျအရမျးအဆငျပွပေါတယျ။အယျလျကာလီ ကနအေယျလျကာလိုငျးထိထပျပွောငျးလဲလို့ ရပါတယျ။ရသေနျ့ဆိုတာရစေဈနဲ့စဈထားတဲ့မွဈရခြေောငျးရကြေိုသောကျတာပွသာနာမရှိပမေယျ့ရသေနျ့ဗူးတှကေအပူပေးကြိုခကျြသောကျလို့မရပါ။
300ကပျြ အယျလျကာလီ သောကျရသေနျ့လီတာဝကျကို 5000 လောကျပေးသောကျရပါတယျ။ရသေနျ့ အားလုံးသညျRoဖွတျထားတာပါ။ရိုးရိုးရသေနျ့ကိုအယျလျကာလီပွောငျးလို့ရပါတယျ။အယျလျကာလီရသေနျ့ စဈမစဈ test လုပျကွညျ့တဲ့ဆေးရညျ Highper marketတှမှောရောငျးပါတယျ။
အယျလျကာလီရစေဈရငျရကေ ခရမျးရောငျပွောငျးသှားပါတယျ။ရိုးရိုးရသေနျ့တှကေအဝါရောငျပွောငျးသှားပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ရိုးရိုးသနျ့တှထေဲမှာ အကျစဈဓာတျတှေ ပါပါတယျ။အာဆငျးနဈကို ခဲဓာတျမြားနတေဲ့ရတှေကေိုတော့ကြိုခကျြသောကျလို့မရပါ။
ခဲဆိပျသငျ့နိုငျပါတယျ။ အသအေခြာသိခငျြရငျ အယျလျကာလီရသေနျ့အကွောငျးရိုကျရှာကွညျ့ပါ။အယျလျကာလီရသေနျ့ကအကြိုးမြားစှာဖွဈထှနျးစပေါတယျ။ ဒါကကြှနျမသဘောထား သကျသကျပါ။
ဖတျခဲ့ရတဲ့စာပတှေနေဲ့ကိုးကားခွငျးဖွဈပါတယျ။ယုံခငျြမှယုံပါ။ခဈြတဲ့လှငျနှငျးဆီလှိုငျ ဆိုပွီးပွောပွထားခကျြအားမသိသေးသူမြား သတိပွုဆငျခွငျနိုငျကွစဖေို့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ။credit-original writer
ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအဖြစ်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ရေသန့်ကိုရေနွေးကျိုသောက်တာ မဟုတ်ပဲနေပူထဲချထားရင်တောင်ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ရေသန့်ဖြစ်ဖို့ကလိုရင်းဆေးခပ်ရပါတယ်။ရေသန့်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကလိုရင်းဓာတ်က အပူနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါကလိုရိုဖောင်းဓာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးကြာရှည်အပူပေးသုံးစွဲလာတဲ့အခါ
အပူပေးကျိုသောက်ကြပါ။ဖြစ်ရင်ခံကြပါ။ ရိုးရိုးရေသန့်သည်PH7ပါ။PH7 ကိုထပ်သန့်စင်ရင်အယ်လ်ကာလီရေသန့် ဖြစ်လာပါတယ်။
အယ်လ်ကာလီသောက်ရေသန့် ဖြစ်သွားပါတယ်။အယ်လ်ကာလီသောက်ရေသန့်သည်ကျန်းမာရေးအတွက်အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။အယ်လ်ကာလီ ကနေအယ်လ်ကာလိုင်းထိထပ်ပြောင်းလဲလို့ ရပါတယ်။ရေသန့်ဆိုတာရေစစ်နဲ့စစ်ထားတဲ့မြစ်ရေချောင်းရေကျိုသောက်တာပြသာနာမရှိပေမယ့်ရေသန့်ဗူးတွေကအပူပေးကျိုချက်သောက်လို့မရပါ။
300ကျပ် အယ်လ်ကာလီ သောက်ရေသန့်လီတာဝက်ကို 5000 လောက်ပေးသောက်ရပါတယ်။ရေသန့် အားလုံးသည်Roဖြတ်ထားတာပါ။ရိုးရိုးရေသန့်ကိုအယ်လ်ကာလီပြောင်းလို့ရပါတယ်။အယ်လ်ကာလီရေသန့် စစ်မစစ် test လုပ်ကြည့်တဲ့ဆေးရည် Highper marketတွေမှာရောင်းပါတယ်။
အယ်လ်ကာလီရေစစ်ရင်ရေက ခရမ်းရောင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ရိုးရိုးရေသန့်တွေကအဝါရောင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ဒါကြောင့် ရိုးရိုးသန့်တွေထဲမှာ အက်စစ်ဓာတ်တွေ ပါပါတယ်။အာဆင်းနစ်ကို ခဲဓာတ်များနေတဲ့ရေတွေကိုတော့ကျိုချက်သောက်လို့မရပါ။
ခဲဆိပ်သင့်နိုင်ပါတယ်။ အသေအချာသိချင်ရင် အယ်လ်ကာလီရေသန့်အကြောင်းရိုက်ရှာကြည့်ပါ။အယ်လ်ကာလီရေသန့်ကအကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ ဒါကကျွန်မသဘောထား သက်သက်ပါ။
ဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာပေတွေနဲ့ကိုးကားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုံချင်မှယုံပါ။ချစ်တဲ့လွင်နှင်းဆီလှိုင် ဆိုပြီးပြောပြထားချက်အားမသိသေးသူများ သတိပြုဆင်ခြင်နိုင်ကြစေဖို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။credit-original writer
မွတျစှာဘုရားကိုယျတိုငျ ညှနျကွားခဲ့သော လကျရှိဘ၀မှာ မိဘကြေးဇူးကို အကဆြေပျတဲ့နညျး….